All Categories – Zimbabwe A World Of Wonders
Zimbabwe received the best destination for adventure Award during the ongoing International Tourism Bourse taking place in Berlin Germany from 09-13 March 2016. The Award among other aspects recognizes Zimbabwe’s strides in promoting the destination to the world markets and more so its adventure appeal to the Pacific and Asian markets. The Award was presented […]
No Comments ITB Berlin, zimbabawe
The official preliminary statistics released by the Zimbabwe Tourism Authority recorded a 7 % increase in tourist arrivals from 24 572 to 26 355 have been confirmed by the German Information Centre (GIC). According to their official website www.gicafrica.diplo.de after a research conducted on the first trade business day at ITB 2016. Zimbabwe featured among the […]
Government says it is courting a number of international airlines, some of them from Turkey, Kenya and Dubai to fly into this resort town once the upgrade of the Victoria Falls International Airport has been completed. Work on the multi-million dollar facility, bankrolled by China’s Exim Bank through a concessionary loan of US$150 million, started […]
How to Travel To Zimbabwe, by Air and Road By Air Harare International Airport Harare International Airport is located 15kilometres south of Harare City, the capital of Zimbabwe. It is the main gateway into Zimbabwe and alternate entry point into Central and Southern Africa. The runway is 4725 metres long and 46 metres wide Joshua […]